Java | Tho Hi
08/02/2015 by thohi
Ubuntu မှာ openjdk java7runtime ကို software center ကနေ သှငျးလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ oracle က Java 8 ကိုသှငျးခငြျတဲ့သူ လိုအပျလို့ သှငျးရမယျ့သူတှအေတှကျ installation လုပျတာကို ရေးပွပါမယျ။ Android developer တှအေတှကျလညျးလိုအပျပါတယျ။ တကယျလို့ android studio ကိုအသုံးပွုပွီး openjdk ကိုသုံးနမေယျဆိုရငျ oracle jdk ကိုသုံးဖို့ အခကြျပွနတောလေး တှေ့နိုျငပါတယျ။ ကိုယျ့စကျက 32bit (or) 64bit ဘယျလိုမြိုးလညျးမသိဘူးဆိုရငျတော့ အခုလိုစဈကွညျ့ပါ။
ဒီဆိုဒျမှာ နောကျဆုံးထှကျတဲ့ version ကို စကျရဲ့ 32 bit (or) 64 bit လားဆိုတာကွညျ့ပွီး ကူးလိုကျပါ။
အဲဒီမှာတှေ့ရနိုငျတာက Redhat,Debian,Mac Os X,Solaris, Windows တို့အတှကျ zip လုပျထားတဲ့ ဖိုငျကိုတှေ့ရပါမယျ။ Ubuntu အတှကျကတော့ ဥပမာ။ ။ 64bit အတှကျဆိုရငျ jdk-8u31-linux-x64.tar.gz (153.45MB) ကို ကူးဆှဲလိုကျပါ။
ကိုယျ့စကျထဲမှာလညျး Java version ဘယျလာကျရှိလညျးသိခငြျရငျ စဈကွညျ့လို့ရပါတယျ။
ပုံမှနျအားဖွငျ့ Ubuntu မှာ openjdk version ရှိကွောငျးပွပါလိမျ့မယျ။ အခု jdk သှငျးမယျ့ပုံစံက အရငျ openjdk ကို ဖွုတျထုတျပွီး oracle jdk ကိုအသဈပွနျသှငျးတာမြိုးပါ။ သတိထားရမှာက တခြို့ app (or) project တှကေို အရငျ openjdk နဲ့ အသုံးပွုထားပွီး ဖွုတျခလြိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ ပြောကျပကြျသှားတာမြိုး မဖွဈအောငျ သတိထားရပါလျိမ့မယျ။ အခု openjdk ကိုဖွုတျပါမယျ။
ပွီးရငျ ကူးထားတဲ့ oracle jdk ထားဖို့ folder တခုဆောကျပေးပါမယျ။
ကူးလိုကျတဲ့ zip ဖိုငျကတော့ download folder ထဲရောကျနပေါလိမျ့မယျ။ အဲဒီ zip ဖိုငျကို ကိုယျသိမျးခငြျတဲ့နရောကို တခါထဲ ရှေ့ထညျ့လိုကျပါမယျ။ ဥပမာ။ ။ /usr/local/java ဆိုတဲ့နရောကို ရှေ့ပါမယျ။ မရှေ့ခငျ အဲဒီ folder ကိုတညျဆောကျပါမယျ။
ပွီးရငျ zip ဖိုငျကိုထညျ့ပါမယျ။
sudo cp -r jdk-8u31-linux-x64.tar.gz /usr/local/java/
ပွီးရငျ အဲဒီနရောကို ဝငျပါမယျ။ zip ကိုဖွညျပါမယျ။
sudo tar -xvzf jdk-8u31-linux-x64.tar.gz
ပွီးလို့ဖွညျ့ကွညျလိုကျလြှငျ folder တှေ့ပါလိမျ့မယျ။
အဲဒီမှာ jdk1.8.0_31 ဆိုတဲ့ folder ကိုတှေ့ပါမယျ။ jre က အထဲမှာရှိပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာဆကျကွညျ့ပါ။ ပွီးရငျ system path ကို ညှနျးပေးဖို့ ပွငျဆငျမှုတှလေုပျပေးပါမယျ။ ကိုယျကွိုကျတဲ့ text editor ကိုသုံးပွီးပွငျနိုငျပါတယျ။ အခုတော့ နမူနာအနနေဲ့ vim သုံးပွီးပွငျကွညျ့တာပေါ့။
နောကျဆုံးလိုငျးအထိ down arrow လေးနဲ့ရှေ့သှားလိုကျပါ။ အဆုံးလိုငျးရဲ့ နောကျဆုံးစာလုံးရောကျလြှငျ i ကိုနှိပျလိုကျပါ။ အဲဒါက စာတှရေိုကျသှငျးဖို့ insert command ပေးလိုကျတာပါ။ ထပျမံဖွညျ့ပေးရမှာကတော့
ပွီးရငျတော့ Esc key နှိပျပွီး စာဖွညျ့ရိုကျခွငျးမှထှကျကာ :wq! ဆိုပွီး ပွောငျးလဲထားတဲ့စာတှကေို သိမျးပါမယျ။ ပွီးရငျတော့ စနဈကသိအောငျ ရှိတဲ့နရောကို ညှနျးပါမယျ။
jre အတှကျ ညှနျးဆိုခကြျပါ။
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jdk1.8.0_31/bin/java" 1
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/local/java/jdk1.8.0_31/bin/javac" 1
web start အတှကျ ညှနျးဆိုခကြျပါ။
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/local/java/jdk1.8.0_31/bin/javaws" 1
ဒီလိုလမျးညှနျပေးလိုကျပွီးရငျတော့ စကျက လိုအပျရငျ အဲဒီနရောကနေ ယူသုံးပါမယျ။ ပွီးရငျ အခု jdk ကို ဦးစားပေးသုံးဖို့ ညှနျကွားပါမယျ။
sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jdk1.8.0_31/bin/java
sudo update-alternatives --set javac /usr/local/java/jdk1.8.0_31/bin/javac
sudo update-alternatives --set javaws /usr/local/java/jdk1.8.0_31/bin/javaws
ပွီးရငျ စနဈကို လမျးကွောငျးပေးထားတဲ့ အသဈကို သိအောငျ reload လုပျပေးပါမယျ။
အဲဒါပွီးရငျတော့ Ubuntu ကို ပွနျစရငျ စနဈတခုလုံးက oracle java ကိုသိသှားပါပွီ။
java version “1.8.0_31″
javac version 1.8.0_31
အခုဆိုရငျတော့ java 8 ကသငျ့စကျထဲမှာ ရောကျရှိနပေါပွီ။ တခုသတိထားစရာပွောခငြျတာကတော့ /usr/bin/ ထဲဝငျကွညျ့ရငျ java ကို မတှေ့ရပဲ တခွား javac နှငျ့ javaws ကိုပဲ တှေ့ခဲ့ရငျ စိတျမပူပါနဲ့ အပေါျမှာ install လုပျတဲ့အခြိနျမှာ link ကိုဖနျတီးပေးသှားမှာပါ။ အဟောငျးရှိခဲ့ရငျလညျး ဖွုတျလိုကျလို့ရပါတယျ။ သူက update အလုပျခံရတဲ့ သဘော လမျးကွောငျး ပွောငျးပေးတဲ့ သဘောမြိုးပါ။ မူရငျး jdk 1.8 ရှိတဲ့ folder ထဲက execute လုပျလို့ရတဲ့ ဖိုငျတှစေီကို လမျးညှနျပေးတာပါ။ အဆငျပွပေါစလေို့ မြှောျလငျ့ပါတယျ။
Posted in Notes.	Tagged Android Studio, Java, Oracle JDK, Ubuntu.
Firefox ရဲ့ servo အကွောငျး
Archives Select Month April 2018 September 2017 October 2016 July 2016 June 2016 February 2016 February 2015 March 2014 February 2014 October 2013 September 2013 December 2012 March 201
စာအုပ်လေးများ Select Category Books (8) Notes (25)